Deenmark: Qooys soomaali ah oo sharcigii lagala noqday dibna loogu celinayo Soomaaliya | Somaliska
Denmark / Socdaalka
Wararka aanu ka heleeyno dalka Deenmark, ayaa sheeegaya in qooys soomaaliyeed oo dalkaasi ku nool lagala noqday dal ku joogii dalkaasi. Qooyskan ayaa ka mid ah soomaali badan oo dowlada dalkaasi sheegay sanadkii hore dabayaaqadiisa ineey kala noqoneeyso sharciga dibna ugu celineeyso dalkoodi.
Arrrintan ayaa timid ka dib markii Deenmark sheegtay in reerkan soomaaliyeed ay deegaanaddii ay ka soo jeedeen ay ka nabdoon tahay intii hore, dibna loogu celinayo. Cali Aaden waxaa uu dalkaasi yimid sanadkii 2012-kii, xaaskiisana ay uun sanad ka dambeeysay, wixii waqtigaasi ka dambeeyey waxaa ay reerkaasi ku nagaadeen Denmark oo ay wiil yar oo saddex jir ah ku dhaleen. Wargeyska xag jirka ah ee Jyllands Posten oo amuurtan wax ka qoray, ayaa sheegay in qooyska reer Cali Aden maalmo ka hor loo soo diray warqad loogu sheegay in dal ku joogii dalkaasi lala laabtay islamarkaasna lugu siiyey inuu ka baxo Deenmark sida ugu dhaqsaha badan.
Cali iyo reerkiisa oo ay soo wajahday xaalad aad u adag, ayaa wargeyska u sheegay in uu cabsi qabo mustaqbalka wiilkiisa, lana soo daristo dhibaatadii isaga ku kaliftay in dalkiisa kaga soo baxsado. Wuxu sidoo kale sheegay in arrin cajiib ah ay tahay in ilmo yar oo dalka ku dhashay lugu qasbo in dalka looga dhoofiyo lana duudsiiyo xaquuqdiisi bani’aadnimo. Dalka Deenmark ayaa sanadkii hore shaaciyey in soomaali badan o boqolaal garaya ay sharciyada kala noqonayaan, dibna ay ugu celinaya dalkooda hooyo, sababo la xirriiro nabadgalyo iyo xasilooni ka jirta deegaanaddii ay asal ahaan ka yimaadeen. Sidaas si la mid ah ayaa Noorway-na a ay sheegtay sanadkii ina dhaafay horaantiisa in dad gaaraya 16.00 ay kala noqotay dal ku joogoodii. Dadkaas ayaa waxaa ka mid ah Mahad Cabiib oo ah muwaadin mugdi la galiyey soomaalinimadiisa kiis-kiisana gaaray heer maxkamadeed.